सर्वाेच्च अदालतभित्र अख्तियार, मदिराका लागि घुस लेनदेन ? - NepalKhoj
सर्वाेच्च अदालतभित्र अख्तियार, मदिराका लागि घुस लेनदेन ?
नेपालखोज २०७६ मंसिर १८ गते १४:५५
१८ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा खुलेआम घुस माग्ने नायव सुव्बा सुधिरकुमार खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उनले नौ हजार घुस लिएकार दुई लाख ५० हजार घुस लिने प्रयास गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलमा परेका ठेकदार देवजंग शाहीसँग उनले घुस लिएका हुन् । शाहीलाई बिशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश दिएको थियो । धरौटीमा छुट्न माग गरी उनी सर्वाेच्चमा गएका थिए ।
सर्वाेच्चका नासु खड्काले आफूले न्यायधीशसँग कुरा गरेर छुटाइदिने भन्दै तीन लाख मागेका थिए । पछि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ मागेका थिए । त्यसको अडियोसहित शाहीले अख्तियारमा बुझाएपछि उनी गत महिना पक्राउ परेका थिए । एक महिना थुनामा राखेर आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अनुसन्धानको क्रममा न्यायधीशसँग भने कनेक्सन नदेखिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसअघि उनले दुई पटक शाहीका दाईसँग मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिने भन्दै नौ हजार घुस लिएका थिए । त्यसमा पनि उनीविरुद्ध छुट्टै मुद्दा दायर भएको छ ।
अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका अधिकारीका अनुसार उनी अत्याधिक मदिरा पिउँदथे । हरेक दिन मदिरा पिउने बानी भएकाले त्यसका लागि उनले खुलेआम घुस माग्न थालेका थिए । मदिराकै लतको कारण उनमा घुसको लत बसेको उनीहरुको भनाई छ ।